Olom-pirenena Miady Amin’ny Governemanta Mba Hanan-jo Handravaka Ilay Hazo Be Maneho Ny Andro Fety Ho An’i Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2014 10:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, বাংলা, polski, English
Ny Hazon'ny Taona Vaovao 2015 ao Kyrgyzstan. Sary avy amin'i Aki Press, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny asa goavana indrindra atrehan'ny governemanta monisipalin'ireo tanàna tao anaty firaisana Sovietika fahiny dia ny famoronana toe-po matrika fety mialoha ny fankalazàna Taombaovao. Notsarain'ny fitsaràn'ny hevi-bahoaka ho tsy mahavita azy ny biraon'ny Ben'ny Tanàna ao Bishkek, Kyrgyzstan.
Tena tsy mahavita azy raha ny marina, ka dia nanomboka nanao fanentanana iray ireo olom-pirenena mba ho izy ireo ihany no hahatontosa izany antsakany sy andavany, na dia eo aza ny fandrahonana sazy ara-bola hataon'ny fanjakàna.
Bishkek, toy ireo firenena rehetra hafa ao anatin'ny firaisana Sovietika, manana vahoaka Kristiana Ortôdôksa, dia mankalaza ny Krismasy rehefa volana Janoary, saingy ny andro fety tena iarahana mankalaza be indrindra any amin'ny firenena Silamo, toy ny fomban-drazana kaomionista, dia ny Taombaovao.
Ny Hazon'ny Taombaovao, na yolka, no ivon'ireny fankalazàna ireny ary narehitra tao amin'ny kianja afovoan'ny renivohitra tamin'ny 22 Desambra.
Nefa raha toa ka mahasarika ny firehetan'ilay yolka ho an'ity taona ity rehefa alina, dia marobe kosa ireo olom-pirenena no mitaraina fa ratsy endrika mandratra maso izany rehefa mihiratra ny andro.
Haingo natao tamin'ilay Hazon'ny Taombaovao. Sary avy amin'ny vb.kg, fampiasàna nahazoana alàlana.
Olona iray nitondra fanehoankevitra tao amin'ilay tranonkalam-baovao malaza vb.kg, no nilaza hoe “toran'ny hehy amin'ny ataon'ny governemanta ny olom-pirenena”, noho ireo haingo fisapisaka, plastika manjelanjelatra sy acrylique — heverina ho manana endrika kilalao — ireny no nandravahana ilay hazo. Manambara ny governemanta fa misanda eo amin'ny 50 dolara Amerikana eo ny haingo tsirairay, raha manakaiky ny 50.000 dolara Amerikana no ilaina hanaingoana ny kianja afovoany manontolo.
Tamin'ny fanehoankeviny tao amin'ny pejy Facebook an'ny iray amin'ireo tranonkalam-baovao sangany ao amin'ny firenena, nolazain'i Bishkek, mponina ao Gulzada, fa ho azy dia nanimba ny fahafinaretan'ny fialàny sasatra ilay hazo :
Mahamenatra! Nahita ity “Hazon'ny Taombaovao” ity aho omaly, ary dia tena tohina…Tena nosimbàn-dry zareo ny toe-po nataoko hiatrehana ny Taombaovao! Tokony ho toy izao ve no ho endriky ny hazo natao hankalazan'ny firenena ny Taombaovao?!
Raha toa ireo olom-pirenena ka manao fampitahàna tsy mitsitsy amin'ireo Hazon'ny Taombaovao hita any amin'ireo firenena hafa tao anatin'ny firaisana Sovietika fahiny — Rosia indrindra indrindra — dia hitako ho miangatra ihany. Sady izao koa, miaraka amin'i Tajikistan, Kyrgyzstan no firenena mahantra indrindra nivoaka avy tao anatin'ny fahalevonan'ny Firaisana Sovietika.
Na izany aza dia maro amin'ireo manakiana an'ilay yolka no miteny hoe ny kolikoly tsy ahitàm-panantenana ataon'ny governemanta no nandiso ny fomba fijerin'ny olom-pirenena ny tena fahaizana miaina fetibe.
Raha anontaniantsika izy ireny dia azo antoka fa hiteny hoe tsy manana vola ampy ho enti-manana. Te-hanoro hevitra azy ireo aho mba hijery ny any anaty paoketran-dry zareo aloha! Ny kianja afovoany [miaraka amin'ny hazo eo aminy] no sary maneho ny firenentsika…
Ho anà fiadidiana tanàna izay mahantra ara-bola dia mahasadaikatra ihany ny hoe olona avy any anatin'ny vahoaka no tonga ny fanomezana soso-kevitra hanangona vola mba handravahana tsara ilay hazo, raha marobe amin'ireo olom-pirenena mavitrika ao Bishkek no nanome tolo-kevitra ny hanaovana hetsika tselatra, ka amin'izany dia ireo mponina ao an-drenivohitra no handravaka ilay Hazon'ny Taombaovao fa tsy misy idiran'ny governemanta mihitsy. Mpisera iray tsy nitonona anarana no namoaka ny antso tao aminà sehatra iray malaza fifampiresahana :
Maro ny olona no tsy afa-po amin'ilay Hazo Be ho an'ny Taombaovao ao Kyrgyzstan, ka dia nanapa-kevitra izahay ny hikarakara hetsika. Ny mponina rehetra dia afaka mitondra haingo mahafinaritra ho an'ilay hazo, ary isika no hanàfy azy io, tsy ilàntsika fanampiana!
Avy hatrany ilay hetsika tselatra dia nahazo valinteny avy amin'ny manampahefana iray ao amin'ny polisin'ny tanàna, izay nilaza fa fanànan'ny fiadidiana ny tanàna ilay hazo ary nandrahona hampandoa sazy izay rehetra mety ho endrika fanaingoana tsy nahazoana alàlana. Hiaro ilay hazo ny polisy, hoy ilay manampahefana nanohy.
Ny 2012 no fotoana farany nisian'ny adihevitra be tahaka izany momba ny Hazon'ny Taombaovao teo anatin'ny fiarahamonina Kyrgyz, fony nidaraboka ilay hazo be, tranga izay natolan'ny olona ho vokatry ny rivotra sy ny fotodrafitrasa tsizarizary tamin'izany fotoana.
Ny kianja Ala-Too ao Bishkek, toerana misy ilay hazon'ny fety dia efa toerana nitrangan'ny revolisiôna tamin'ny 2005 sy 2010. Raha tahàka ny hoe amin'jny 27 Desambra no hatao ilay hetsika tselatra, dia hahaliana tokoa ny hahita izay fomba hiatrehan'ny polisy izay rehetra mety ho fanaingoana ataon'ny mpirotsaka an-tsitrapo eo —